Lalatiana Rakotondrazafy : Famitaham-bahoaka…! -
AccueilRaharaham-pirenenaLalatiana Rakotondrazafy : Famitaham-bahoaka…!
Nofahanan-dalitra sy nofitahina hatrany ny vahoaka malagasy, ary rehefa dinihina ny tantara sy ny zava-nitranga teto dia fanaovana fitaovana niarovana, na nitadiavana tombontsoa manokana avokoa ny fihetsiketsehana rehetra nampisalorana ny hoe « hetsi-bahoaka ».
Nafana tokoa ny fifandonana teo amin’ny onjam-peo Free FM an-daniny, Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ankilany ny taona 2012 fony mbola teny amin’ny foibeny tetsy Ankorondrano no nisy ny radio FM 104.6. Notanan’ny teny amin’ny zandarimaria Betongolo ireo mpanentana roa tao amin’ny Free FM, dia i Fidèle Razara Pierre sy Lalatiana Rakotondrazafy ny faha-02 Mey 2012. Navotsotry ny fitondrana HAT ny tolakandron’ny faha-03 Mey 2012, daty ankalazan’izao tontolo izao ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Nivantana teny Ankorondrano rehefa avy nivoaka ny « violon », ary nanomboka nanentana ny olona tsy hanaiky intsony izany fitondrana Andry Rajoelina izany, sady nanomana ihany koa ny fitoriana an’i Mamy Ravatomanga teny amin’ny Bianco.
Isan’ny nanameloka ny fitazonana an’i Fidèle sy Lalatiana teny amin’ny zandarimaria ireo fikambanana maro, raha tsy hiresaka afa-tsy ny Sendikan’ny Mpanao Gazety, ny fikambanan’ny Mpanao Gazety Zokiolona, ka nisy ny fametrahana lamba mainty tetsy amin’ny tsangambaton’ny Holafitry ny Mpanao Gazety etsy Soarano.
Nanapa-kevitra hanatitra io fitoriana an’i Mamy Ravatomanga noho ny resaka « bois de rose » io i Lalatiana sy Fidèle ny faha-7 May 2012. Nisy nitoraka tamin’ny vato be anefa ny fitaratry ny fiara Mercedes 205 nitondra azy mianadahy sy ny mpisolovava Andry Fiankinana rehefa nihazo an’Ambohibao, tokony ho tamin’ny telo tolakandro ka voatery nanova lalana haingana ny mpamily ka nihazo an’Ivato. Nihazo ny foiben-toeran’ny Bianco ihany anefa afaka ora vitsy ka nametraka izany fitoriana izany.
Vahoaka an’arivony no resy lahatra teo anatrehan’izany fitoriana an’i Mamy Ravatomanga teny amin’ny Bianco izany, ka nanara-dia ny hetsika Free FM. Teo ihany koa ny fitakiana ny tokony hanokafana ny kianjan’ny Demôkrasia amin’ny anaran’ny fahalalahana maneho hevitra. Fehiny, ny fitondrana Andry Rajoelina amin’ny ankapobeny mihitsy no naboridan’i Lalatiana sy Fidèle tamin’izany andro, ka ny raharaha Mamy Ravatomanga no tena nanamarika izany.
Iaraha-mahalala fa etsy amin’ny Villa Pradon an’i Mamy Ravatomanga no misy ny foiben-toeran’ny Free FM sy ny gazety Freenews amin’izao fotoana ho fampiharana ilay fifanekena miafina nosoniavin’i Lalatiana Ratokondrazafy ny faha-8 Novambra 2013 fa tsy hiresaka momba izany Mamy Ravatomanga izany intsony ny tenany. Izany hoe nofitahan’i Lalatiana avokoa ireo vahoaka nanara-dia sy nanohana azy nandritra ny hetsika Free ny taona 2012, izay niandrandra izany fahalalahana maneho hevitra izany, nanantena fa tokony hisy tokoa ny fanadihadiana mikasika ny fanondranana « bois de rose » eto Madagasikara, ary indrindra ny tsy fanekena izany fanonganam-panjakana izany.
Maro ny dinika sy ny fihaonana natao ho fitakiana ny fampiatoana ny didy fampisamborana navoakan’i Andry Rajoelina ho an’i Fidèle sy Lalatiana tamin’izany. Nisy mihitsy aza taty aoriana ny fihaonana tamin’ireo mpanelanelana iraisam-pirenena avy amin’ny GIC sy ny SADC, raha tsy hiresaka afa-tsy ny dokotera Simao tetsy amin’ny Colbert Antaninarenina ho fanokafana indray ny onjam-peo Free FM, izay nakaton’ny fitondrana HAT niharo fandrobana sy halatra.
Fa toa ny sosoa notapohan-drano aty aoriana rehefa nahita ity fifanekena nosoniavin’i Lalatiana Rakotondrazafy ity, izay milaza mazava tsara fa tsy hiresaka momba izany Mamy Ravatomanga izany intsony. Fantatra koa anefa izao fa mbola misy fifanarahana miafina hafa ankoatra an’i Mamy Ravatomanga nosoniavin’i Lalatiana Rakotondrazafy, ary ho avoaka rehefa azo izany porofo izany.
Izay no nilazana tetsy ambony hoe famitaham-bahoaka sy famahanan-dalitra vahoaka avokoa ny hetsika nifandimby teto. Fikatsahana tombontsoa manokana, na fiarovana tombontsoa manokana, izay no tena marina. Amin’ny fomba ahoana no ahafahan’i Lalatiana Rakotondrafy mitaky izany antsoiny hoe “fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety izany”, kanefa ny tenany izao mihitsy no manitsakitsaka ny hasin’ny asa fanaovan-gazety?